I-Nanotechnology ku-cannabis - Ummeli Wezimboni Zentsangu
I-Nanotechnology ku-cannabis ingenye yezindlela ezintsha embonini: Iminyaka embalwa edlule ibe yinhle nge-cannabis. Njengoba amazwe amaningi evumela lesi sitshalo ngokusemthethweni, umphakathi uqala ukwamukela - ukusetshenziswa kwemikhiqizo ye-cannabis, futhi inzuzo evela embonini ifinyelela phezulu kakhulu, akumangalisi ukuthi ezinye izimboni zingafuna ukungena embonini ye-cannabis.
INanotechnology isetshenziswe isikhathi eside ezimbonini zokudla nemithi, futhi muva nje, izinkampani eziningi ze-nanotechnology zizama ukushintshela embonini ye-cannabis. Futhi yize amandla we-nanotechnology ku-cannabis aqala ukubhekwa, yisikhathi esifanele sokubuza: yini eletha i-nanotechnology embonini ye-cannabis?
Isebenza kanjani i-nanotechnology ku-cannabis
Kulezi zinsuku, kunezinhlobo nje zemikhiqizo ye-CBD ongacabanga ngayo lapho emakethe. Okudliwayo, okuxutshiwe, imikhiqizo yezimonyo nezesikhumba ... uhlu lwemikhiqizo lungaqhubeka unomphela. Okunye kokungezwa okusha kakhulu kulolu hlu yimikhiqizo ye-nano-CBD.
Kungani umuntu angadabula phakathi kokulandela inqubo eyinkimbinkimbi uma kukhona ezinye izindlela - ezilula? Yebo, ngokuncipha kwezinhlayiya bese uqhekeza izinhlanganisela, ngokuyisisekelo ingangena emzimbeni ngemifudlana yegazi futhi ifinyelele esibindini ngokushesha kunokujwayelekile.
INanotechnology ingasiza ekwakheni imikhiqizo emisha yomkhakha we-cannabis, futhi lokhu kuhlobene kakhulu nemvelo ye-CBD.
Ngakho-ke, i-nanotechnology ihlangana ngani nalokhu? Uma uhlukanisa i-cannabidiol ibe ama-nanoparticles, iyanamathela futhi ibophe kalula ngama-lipids nama-molecule wamanzi. Lokhu kuvumela ukumuncwa okusheshayo nokulula kwama-cannabinoids.
ISIQONDISO ESIQALILE: INDLELA YOKUTHOLA ILAYISENISI YOKUPHATHISWA KWE-MICHIGAN
Izinzuzo ze-nanotechnology ku-cannabis
Ngakho-ke, i-nanotechnology ku-cannabis ngokuyisisekelo izokwenza ukuthi imikhiqizo iphumelele kakhulu ngenxa yokuthi umzimba uzoyimunca kanjani. Kungasiza futhi ukuletha etafuleni imikhiqizo emisha ebingafani neze ngaphambili: cabanga ngokukwazi ukuphuza noma yisiphi isiphuzo nge-CBD, ngokwesibonelo. Futhi, cabanga ukuthi ukutholakala kwemikhiqizo ye-cannabis noma ye-cannabis lapho kudliwe ngomlomo kuphakathi kuka-4% kuya ku-20%, ngokusho kocwaningo.
Lokhu kusho ukuthi, uma udla i-100mg edliwayo, umzimba wakho kungenzeka usebenzisa i-4-20mg kanti konke okunye kuyachitha. Ngokwenza nanosizing izinhlayiya ze-cannabidiol, ungathola ukutholakala kwe-90% kuya ku-100%. Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, uzobe uthola okuningi ngokuncane.
INanotechnology nayo iba nomthelela omuhle embonini yezokwelapha ye-cannabis. Okunye ukusetshenziswa okufanele kakhulu kwe-nanotechnology ku-cannabis ukulethwa kwezidakamizwa: i-nanotechnology ingakhiwa ukuze ithumele izinto ngqo kumaseli athile. Cabanga ukukwazi ukuqondisa umuthi, ake sithi, iseli lomdlavuza eligulayo, futhi ngaleyo ndlela kunciphise amandla abo okubopha ngamaseli aphilile.
I-Nanomedicine isivele isetshenziswa ukwelapha nokuvikela izifo nezifo ezahlukahlukene, kufaka phakathi umdlavuza, isifo sezinso, ukutheleleka kwefungal, i-cholesterol ephezulu, i-multiple sclerosis, ubuhlungu obungapheli nesifuba somoya.
Kepha, yini engenziwa ngokusetshenziswa kwe-nanotechnology ku-cannabis? Yebo, ososayensi sebevele bakufakazisile lokho okwenziwe ngama-cannabinoids okulethwa "ama-nanocarriers" kusebenza kakhulu kunanoma iyiphi indlela ejwayelekile yokulethwa yokwelapha amangqamuzana e-tumor. Kuze kube manje, lezi zivivinyo zenziwe ezitsheni zePetri namagundane, ososayensi bazodinga ukwenza izivivinyo zokwelashwa ukuqinisekisa ukuthi ziyasebenza yini nakubantu, kepha lokhu kuyindlela ethembisayo yocwaningo.
Ikusasa le-nanotechnology ku-cannabis
Kulezi zinsuku, kunezinkampani ezithile ezinikele ekusebenziseni kahle kakhulu amakhono okwenziwa kwesitshalo ngokubhanqa i-nanotechnology ne-cannabis. Umqondo walezi zinkampani ukwandisa indlela le mikhiqizo eyenziwe ngayo. Phakathi kwalezi zinkampani, ungathola I-Sonomechanics yezimboni. Le nkampani inikeza imikhiqizo nezinsizakalo eziningi ukudala i-CBD noma i-THC nanoemulsions.
Kodwa-ke, ikusasa le-nanotechnology ku-cannabis alaziwa. Imikhiqizo yeNano CBD ingathatha imboni ye-cannabis iye ezindaweni eziphakeme kakhulu uma isetshenziswe kahle; Ngokwesinye isandla kunemibuzo eminingi maqondana ne-nanotechnology ku-cannabis futhi yisikhathi kuphela esizosho uma kuyindlela enhle okufanele ilandelwe umkhakha.